Fikradda gumeysiga ee tartankii Ruwanda: Reer Galbeedka oo la sheegay inay yimaadeen ilbaxnimo waxayna indhahooda u fureen dadka ay u maleynayaan inay yihiin kuwa jaahil ah oo helay in Tutsiku aad u naxariis badan yahay; waxay saadaaliyeen dareenkiisa iyo dareenkiisa
Waxay si dhakhso leh u xukumeen aasaaska quruxda sida haddii ay u egtahay muuqaalkeeda kore, sharaf ama ama quruxsan astaamaha, sankiisa "Poted" sanka, waxay ahaayeen milkiyo nafta! Aabaha Renard wuxuu qoray 1917: « Le Mututsi waa Yurub Yurub maqaarka madow hoostiisa ”. Le Mututsi waa a "Negro-White". Marka loo eego fasalka 'Monsignor Class', wuxuu farac u yahay "Jinsiyadda Qumman Aryan " (wax la socdo "Of Nooca Semitic ") oo ay ahayd inuu ku baahdo duurjoogta ah oo ay qorraxdu ku dhacday qorrax ka dhacda qarnigii hore ka hor inta uusan soo gelin gobolka Great Lakes ee Afrika.
Cadayashada Tutsiga oo si qeexan ugu sharraxay, Monsignor Kandt, oo aasaasay Kigali, wuxuu cadeyn karaa inuusan waligiis la kulmin wax sirdoon ah sida kuwa "midabyada midabeysan".» (...).
Dhanka Hutus, waxay noqon lahayd mid ka soo horjeedda oo dhammaystiran walaal. Kuwaas ayuu u muuqday "Aficionados" dhaqankii quruxda badnaa shaqsi murugo leh, ceebta aan caafimaadka qabin, qallafsan. Waxaa soo raacay in lagu sharaxay qalin aad u af badan, si aad u adag. Waxaa loo sheegay inuu aad u yar yahay fahamka, gaabin gaabis ah iyo jaranjarooyinka jaranjarada ah. Waxaan u sawiray sidii guul-darrida oo aan yaraynin xoogaa caqli yar. In aanu ahayn fallaadh ama gorgor, laakiin uu yahay nacasnimo ama doqon kibirsan oo ay ahayd in la hoos keeno, hoos loo dhigo, ilbaxnimo.
Markaa la soo bandhigay, aragtida “Rayidka ah”, waxay ku dhawaaqday in Tutsiga waxay laxiriireen waxa loogu yeero dadyowga Beeraley (Kulturvölker) halka Hutus, ka soo ifbaxay dhulka oo u baahan xorayn, wuxuu noqon lahaa « Xaaladda dabeecadda (Naturvölker) ».
(Lambertus Ntisoni, "Waxaan ka gudbay webiyaasha dhiigga: Dhibaatada sarkaal ka tirsan ciidamadii hore ee ciidamada qalabka sida ee Rwanda ”).
Sep29 09: 22